Iyo yero nyika, chihombe chekudzidzisa chigadzirwa cheropa ropa | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Nyaya
Quote naAlbert Espinosa.
Muna 2008 munyori wechiSpanish Albert Espinosa akaburitsa Nyika yero, bhuku rakataurwa nemunyori pachayo harisi rekuzvibatsira. Icho chipupuriro chakareba pamusoro pechiitiko chakaoma uye kudzidza kunokonzerwa nemakore gumi ekurwisa kenza. Nenzira iyi, munyori anovaka rondedzero umo maanoratidza "mamwe machena", aine padyo uye anonakidza maitiro kune muverengi.
Nekudaro, iyo pfungwa yehupenyu hwakatsvuka zvachose, kubva pakutanga, chimwe chinhu chinoshamisa. Ndiri kureva, nei iwo chaiwo ruvara? Chero zvazvingaitika, Espinosa inofumura maonero anokwanisa kuputsa neyakajairika echirwere. Iko - kunyangwe iko kuderera kwehupenyu hwevanhu - zvakakosha kunyudza mune ino, usingatyi kufa.
1 Nezve munyori, Albert Espinosa
1.1 Hunhu mukutarisana nedambudziko
1.2 Kutanga kwehunyanzvi
1.2.2 Firimu neterevhizheni
1.3 Icho chinyorwa chinyorwa chehupenyu hwako
2 Kuongorora kwebasa
2.1 Nei Nyika Yeyero? (Chikonzero chikuru)
2.2 Kukoka kwemunyori kuvaverengi vake
2.3 Zvese ndezvenguva pfupi, kunyangwe hurwere
2.3.1 Ichokwadi chebhuku
3 Pfupiso yebhuku
3.1 Kuda hakutaurirane
Nezve munyori, Albert Espinosa
Uyu munyori wecinematographic zvinyorwa, munyori weanoshamisa zvidimbu, mutambi uye munyori wechiSpanish, akaberekerwa muBarcelona munaNovember 5, 1973. Kunyangwe akange akadzidziswa sainjiniya wemaindasitiri, akatsaurira hupenyu hwake kuhunyanzvi, achiwana mukana wekuwana mukurumbira mu cinema uye pachikuva..
Hunhu mukutarisana nedambudziko
Hupenyu hwaEspinosa hwakachinja zvakanyanya mushure mekuongororwa kweosteosarcoma mune rimwe gumbo pazera remakore gumi nematatu. Aya mamiriro akamukanganisa kweanopfuura makore gumi, kunyangwe zvakadaro, akapinda muPolytechnic University yeCatalonia aine makore gumi nemapfumbamwe. Zvichakadaro - nekuda kwekenza metastases - akatambura kudimburwa kwegumbo pamwe nekubviswa kwepapu uye chikamu chechiropa.
Mamiriro ehutano hwaEspinosa akazo shanda senge chinangwa chekuumbwa kwezvinyorwa zvemitambo yemitambo kana terevhizheni.. Zvakare, apo aidzidza mainjiniya (achiri kurwisa kenza), aive nhengo yeboka remitambo. Nekudaro, huya kutaura kwake kwekutanga semunyori, akafuridzirwa nehupenyu hwake pamusoro pezvose.
Pakutanga, Espinosa akanyora zvinyorwa zvemitambo. Gare gare, akatora chikamu semutambi mu Pelones, chikamu chinoshamisa chekunyora kwake chakafemerwa neruzivo rwake nekenza. Nenzira imwecheteyo, zita iri rakashanda sezita rekambani yemitambo iyo yaakatangisa pamwe neshamwari dzake.
Pazera remakore makumi maviri nemana, akatanga nzira yake paterevhizheni, kunyanya semunyori muzvirongwa zvakasiyana. Hafu yemakore gumi gare gare, munyori wechiCatalan akakwanisa kuzivikanwa paakazadzisa basa remunyori wemufirimu 4th pasi (2003). Kubva pane ino firimu, Espinosa akazvimisikidza pachiratidziri hombe uye akagashira mibairo semunyori wemitambo uye munyori wemitambo mumakore anotevera.
Icho chinyorwa chinyorwa chehupenyu hwako
Pakati-2000s, Albert Espinosa akange atozivikanwa muSpanish hunyanzvi hwepasi nekuda kwemitambo yake, terevhizheni uye cinematographic mabasa, asi aida chimwe chinhuzve. Ipapo, muna 2008 akaburitsa bhuku rake rekutanga, Nyika yero. Mumakore anotevera haana kumira kutsikisa mabhuku, pakati pazvo, taura:
Kana iwe ukandiudza, uya, ini ndinosiya zvese ... asi ndiudze, uya (2011)
Nyika yebhuruu: ida nyonganiso yako (2015)
Kana vakatidzidzisa kurasikirwa taizogara tichikunda (2020)
Sei Nyika yero? (Chikonzero chikuru)
Iri bhuku rinowanzo kuverengerwa se kuzvibatsira nekuda kweshoko rakaziviswa muchinyorwa. Sezvo musimboti werugwaro uchitenderedza kukosha kwehukama, kugara mune zviripo, uchiona divi rakanaka rechokwadi chega chega, zvisinei nekuti mamiriro ezvinhu angaipenda zvakadii ... Kuti uite izvi, Thorny, kubva pane zviri padyo nemaonero, kuvaka nzira yekutanga yekurarama uye kunzwisisa kuvapo kweumwe neumwe.
Naizvozvo, haisi nyaya inorwadza (sekufunga kunoita mumwe murwere wekenza), nekuti iyo nharo inotarisa pane kuda kwekukunda munhu wega wega. Nenzira iyoyo Thorny anokwanisa kuratidza rutivi rwakanaka rwechiitiko chake -kunyangwe zvisinganetsi - asingashandise zvishongo zvinokanganisa kubva pachokwadi chenyaya.
Nyika Yero: Ehe ...
Kukoka kwemunyori kuvaverengi vake
Pakupera kwekutaura, muoni anobvunzwa mubvunzo unotevera: unoda kuita yero here? Kunyangwe ichifanira kujekeswa izvozvo "yero" zvakanyanyisa kupfuura chimiro chehurombo. Chaizvoizvo iro vara Iyo zvakare inomiririra inodziya, yakajeka nzvimbo, uko kudzoka kwese mukana wekudzidza, kukura uye kufambira mberi nesimba rakawanda.
Zvese ndezvenguva pfupi, kunyangwe hurwere
Kurwara kunofananidzira mamiriro asingagumi (sezvakangoita zvinhu zvakawanda nevanhu muhupenyu). Nekudaro, izvi hazvireve kushaya hanya nemhedzisiro yehutano hwakanyanya, ndoda kuisa zita "ephemeral" pane zvese.. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti protagonist wenyaya anorasikirwa chikamu chegumbo uye kunyangwe dzimwe nhengo.
Iwo ma2020 anoenda pasi munhoroondo sechiedza chekubuda kweCovid-19. Iyi denda repasi rose rinogona kutorwa sechiyeuchidzo kuvanhu: Iwe unofanirwa kukoshesa zviripo uye kuratidza rudo kune vadikanwa. Saizvozvo, hazvigoneke kufuratira pfungwa yaEspinosa pazvinhu zvine chekuita nehukama hwevanhu mu Nyika yero.
Albert Espinosa afunga kumutsiridza chiono chake chenyika kubva panguva iyo mamiriro ehutano hwake paanotsanangurirwa. Nekudaro, iko kurangana kwekugadzira nyika yese yaanoti yero. In consecuense, murondedzeri anotsanangudza zvakare zvaanotenda uye nzira yakateedzerwa kusvika panguva iyoyo.
Panguva iyoyo, kana protagonist ikakwanisa kuzviziva nesimba rayo uye nekushaya simba, inogona kushandura kubata kwayo kwepasi. Pamusoro pe, mhedzisiro yeshanduko iyoyo kukonzerwa kubva mukati memunhu inoguma nekunzwisisa kwezviuru makumi maviri nezviviri zvakawanikwa. Heano mashoma.
Izvo zvinodikanwa kuti uchinje maonero kuti unzwisise nyaya dzisina kujekeswa kusvika panguva iyoyo.
Izvo zvinogara zvichikwanisika kusimudza kunaka kwemamiriro asingadzivisike
"Inzwa iwe wakatsamwa" senge yekuzviongorora mechimishini
Izwi rekuti kurwadziwa haripo
Simba rekutanga nguva
Mutumbi werondedzero unotungamirwa nenyaya yehupenyu hwevanhu anecdotal rondedzero yemurume ane kugona kubata zvichemo zvake kana kusaratidza kusuwa achitsanangura mamiriro ake. Saka, Chimwe chizaruro chakakosha hunhu husingatauriki hwekusimbisa kuda. Pakupedzisira, Espinosa anotsanangura kuti chete nekutarisana nekenza ndipo paakakwanisa kuita kuti zviwanikwe zvionekwe.
Pamusoro pezvo, munyori wechiSpanish anoreva kune yeyero sevanhu vanoiswa mucherechedzo avo vanobatsira kuziva mamaki emunhu wega wega anoshamwaridzana navo. Chekupedzisira, iwo rugwaro haruna kuvhara sekudaro. Muchikamu chekupedzisira icho, munyori anotsanangurira vaverengi vake mavambo matsva muhupenyu, asina zvinyorwa, aine chishuwo chisingaperi chekurarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nyaya » Nyika yero